warkii.com » Govinda atoorihii dhoolacadeyntiisa gabdhaha jaceyl ugu qaadeen:
Govinda atoorihii dhoolacadeyntiisa gabdhaha jaceyl ugu qaadeen:
Govinda oo ah atoore dhextaal ah ama dadka badankiisa iska taageeraan oo aan loolan gelin maxaa ugaar ah xidigaan:
1-Govinda iskoor waxuu heestaa 90-maadkii ilaa hada la jabin waayey kaaso ah inuu noqday atooraha kaliya 10-sano xiriir ah ugu yaraan Filim Hit ah la imaanaayey (1990-1999) waa marka la dhaho Decade. Iskoorkan waxaa kaga horeeyay Dharmendra oo 1970-1979 sameeyay sanad walba ugu yaraan hal Filim Hit ah ugu badnaan ilaa 6-Filim sanad gudihiis balse Govinda kadib atoore sameeyo waa la waayey.
2-Govinda waxaa lagu tilmaama kuwii ugu afka qurxoonaa ee Bollywood soo mareen abid qosolkiisa ayaa la sheegay inuu kusoo jiitay malaayin gabdho daafaha caalamka xiligii 90-maadkii.
3-Waxaa loo caleemo saaray ama loo doortay inuu yahay boqorka shactirada Filimada hindiga aflaamtiisa ugu badan waa shactiro xitaa Filimka hadu dagaal yahay qaab jiliinkiisa ayuu shactiro kaaga dhigaa.
4-Govinda waa Dance-yaqaan cajiib badan seddex nooc oo ciyaaraha ah ayuu garanayaa nooca kowaad waa reer galbeed lugaha ayuuna noocaas sifiican oga ciyaara. Nooca labaad waa mida hinduga ee ragg iyo dumar ka dhaxeyso dhaqan ahaan nooca seddexaadna waa mid isaga ugaar ah qofka la fahmsaneena meel cidlu kaga tagaa, Karisma iyo Raveena ayaa sifiican ula fahmi jireen noocan.
5-Govinda waxuu awood u lahaa wajiga inuu ka cayaaro Reaction-ka wajigiisa ciyaar ayee ka turjumned inta badana heesihiisa waa kuwa shactiro ah dadka uu ku madadaaliyo.
6-Govinda taageerayaashiisa waxay kasoo bilaawdaan Bollywoodka waxaana xusid mudan inuu yahay atoore dadka kawada dhaxeeyo caruur iyo ciroolaba taageero uwada yihiin inta badan. Shaqsiyaadka Bollywoodka caanka ka ah ee Govinda taageeraan waxaa kamid ah Amitabh Bachchan, Aamir khan, Salman Khan, Jaya Bachchan, Aishwarya, Katrina, Kareena, Akshay Kumar, SRK iyo kuwa kale.
7-Govinda waa mid kamid ah atoorayaasha naadirka ah ee noloshooda dhabta ah iyo qaab jiliinkooda shaashada isku mid tahay waxuu shaashada ku sameeyo ee shactira ah ayuuna nolosha dhabta ah dadka kula dhaqmaa inta badan.
8-Filimkiisa ugu qaab jiliinka wanaagsan Naseeb ayaa lagu tilmaama dadkii ay isku dhowaayen waxaa kamid ah David Dhawan, Karisma Kapoor iyo Salman Khan.
9-Waxuu taageere u yahay Salman Khan iyo Priyanka Chopra dadkii horena Dilip Kumar iyo Amitabh Bachchan sido kale waxaa lagu xantay inuu xiriir jaceyl la sameeyay atiriishooyinka kala ah Neelam Kothari iyo Rani Mukerji.